Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguMarica
Indlu yaseAmahoro ibekwe kumbindi weVenetico M. (Me). Zonke iinkonzo # iindawo zokutyela, imivalo, ulwandle lwasimahla kunye nezixhobo, ikhemesti, indawo yokumisa ibhasi yeMessina kunye neMilazzo, # zingaphantsi kwe-5 min. emi. IMilazzo imi kumgama oziikhilomitha ezimbalwa ukusuka eVenetico, idolophu ehlanjwe ziilwandle ezimbini enika umoya wokutshona kwelanga. Ii-hydrofoils ezikhawulezayo kunye neenqanawa zihamba zisiya kwiZiqithi ze-Aeolian zisuka kwizibuko laseMilazzo.
I-Messina kunye ne-Taormina nazo iindawo ezinokufikelelwa ukusuka e-Venetico ngokuthatha ithuba le-Rometta motorway junction, iibhasi kunye noololiwe.
A. indlu ilawulwa ngumbutho ongenzi nzuzo i-Anymore. Kumgangatho ophantsi kukho i-bazaar encinci yokurhweba apho kunokwenzeka ukuthenga izinto zezandla zaseAfrika, iimveliso zokutya ze-Altromercato kodwa kunye neempahla, izinto kunye nezinto zokubhala ezivela kwi-Kanò social tailoring shop; ingeniso evela kwiintengiso kunye nenxalenye yomnikelo wezindlu iya kuxhasa iiprojekthi ezikuMazantsi ehlabathi leesile. umkhuthazi.
A.H. ivumba lehlabathi kunye nokunxibelelana kwenkcubeko.
Khetha iiholide zakho ezixhasayo nezinoxanduva.
4.20 · Izimvo eziyi-15
ubumelwane bukwinqanaba lomntu, lilungele yonke iminyaka njengoko unokufumana indawo yakho ngokukhawuleza kwaye kulula.
Ulonwabo oluqinisekisiweyo lwabantu abancinci, kunye ne-aperitifs kunye neeyure zolonwabo eziququzelelwe kuzo zonke iindawo. Kwabo bafuna ukuphumla, i-promenade ebanzi kunye neyakheke kakuhle iya kuba yindawo yokuhamba okunempilo kunye nokuphumla.
Rhoqo ngorhatya, ukutshona kwelanga okumangalisayo kuya kubulisa imini kwaye kufefe ukuhlala kwakho ngothando.
Abantu basebumelwaneni banomoya wokubuk’ iindwendwe kwaye bamkelekile ukuba bakwenze uzive usekhaya ngokubulisa okanye ngoncumo olulula.
I-South idume ngokufudumala ekwazi ukuyihambisa rhoqo kwaye nayiphi na imeko.
Umbuki zindwendwe ngu- Marica
I-bazaar kumgangatho ophantsi ivuliwe ekuseni nangemva kwemini ukuze iindwendwe zithembele kwinkxaso ebalulekileyo nayiphi na ingxaki okanye ulwazi. Ngeeyure apho ubukho bungaqinisekiswanga kunokwenzeka ukuba ufikelele kubaphathi ngefowuni.
Ukuba ibhukishwe ngexesha uA.H. iziqinisekiso zokuhamba ngemoto kunye nomqhubi kwiihambo ukuya kumazwe angabamelwane, ukudluliselwa kwisikhululo seenqwelomoya kunye nesikhululo (iindleko zokurenta ezongezelelweyo).
I-bazaar kumgangatho ophantsi ivuliwe ekuseni nangemva kwemini ukuze iindwendwe zithembele kwinkxaso ebalulekileyo nayiphi na ingxaki okanye ulwazi. Ngeeyure apho ubukho bungaqinis…